FANJAKAN’ I MADAGASIKARA - Wikipedia
FANJAKAN’ I MADAGASIKARA:
Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra dia miditra amin’ ny dingana manaraka indray ny tantaram-pirenena. Tapitra tamin’ ny 17 marsa 2009 ny rafitra repoblikana teto Madagasikara. Mivadika ny pejy. Miova ny tantara. Hajoron’ Andriamanitra eto amin’ ny firenena ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, Fanjakam-pisorona. Ary tsy misy olombelona na vondron’olona na firenena vahiny ahasàkana izany, hoy Ny Andriana RABARIOELINA Ndriana, Mpitarika ny Fihaonambe ny Ampanjaka sy ny Zanakandriana eto Madagasikara.
Izany Fanjakan' i Madagasikara izany dia miainga amin'ny Lalàm-Panorenana vaovao miori-paka sy manaja ny Tantara, ny Soatoavina ary ny Kolotsaina eto Madagasikara, mba hisian’ ny tena fampandrosoana marina, azo antoka, mirindra, mifandanja, isam-paritra, mafy, ary maharitra.Ny anaran’ izany fanjakana vaovao izany dia FANJAKAN’ I MADAGASIKARA. Tany Masina Madagasikara, ary Firenena Masina ny tompontany ao aminy. Ary ireto avy ireo Soatoavina Fito iorenan’ izany Fiaraha-monina vaovao eto Madagasikara dia:
Araka ny Teny Fikasan'Andriamanitra, voalazan' ny maminany efa hatry ny ela, dia hoy Jesoa Tompo: Ahy Madagasikara ! Eo ampelatanako io ! Mpiady mahery Aho ! Izaho no Foloalindahy sy miady mandresy! Ary tsy misy firenena vahiny intsony haharombaka an’ i Madagasikara. Ary Zanahary, Andriamanitra Andriananahary, no Tompon’ ny Fahefana sy ny Fanjakana, ary Izy no mampindrana izany amin’ ny tompontany mba hanaovany ny Sitrapon’Andriamanitra.
4) NY FIHAVANANA, amin’Andriamanitra voalohany indrindra, ary manaraka izany ny fihavànana eo amin’ ny mpiara-belona, indrindra eo amin’ ny samy tompontany, mahay mifankatia, mahay mifamela heloka, mba hisian’ ny fiaraha-monina mirindra.
6) NY FIAROVANA NY TANINDRAZANA, izay nomen’ i Zanahary ho antsika tompontany. Firenena anisan’ izay manankarena indrindra eto ambonin’ ny tany i Madagasikara. Anjarantsika tompontany ihany no mitrandraka ny harenan’ ny firenena, ny manodina ny akora ho voakaly, izay vao mivarotra azy eto an-toerana, na any ivelany raha ilaina izany. Homen’ i Zanahary antsika ny zavatra rehetra ilaina ny amin’ izany.
7) NY FIAROVANA NY FIANDRIANAM-PIRENENA, izay adidy sy andraikitry ny tompontany rehetra, manomboka eo amin’ ny Fokontany ka hatrany amin’ ny Fanjakana Foibe. Fa hoy Jesoa Tompo: Izay rehetra manohitra an’ i Madagasikara dia ho voaroaka! Tsy misy olona mahay mifandahitra amin’ ny hevitr’Andriamanitra !
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=FANJAKAN’_I_MADAGASIKARA&oldid=175553"